Nchịkọta mmekọrịta ọha na eze | Martech Zone
M dere banyere tinye n'ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe gị na ibe ọdịda gị, so timing of infographic enweghị ike ịka mma. Nọmba ndị a na-ama jijiji banyere otu mmekọrịta mmadụ na-esi emetụta visibiliti nke akara gị n'ịntanetị. N'adịghị ka ndị na-ajụ ndị ọzọ, anyị na-achọpụta mgbe niile na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ohere dị egwu iji gbasaa okwu ahụ site na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta dị mkpa. A na-elekọta mmadụ na-agwakọta uru nke okwu ọnụ na mgbakwunye na nkwenye.
Mgbakwunye enyela ihe omuma a, na-ewepu onu ogugu na ihe kariri nde 10 nde ruru nde mmadụ 1.2 ruo afọ 5! A isi takeaway m bụ kasị elu nkekọrịta oge nke 9:30 AM. Ka ị na-arụ ọrụ site na usoro nkesa gị, ị nwere ike iburu n'uche oge mpaghara ndị na-ege gị ntị ịchọrọ!